Caadi ah: Noocyada Aasaasiga ah ee Weerarrada Hacker iyo Sida Loo Bixiyo Website
Helitaanka ujeedooyinkaaga bartilmaameedka SEO waxaa lagu xakameyn karaa dhowr arrimood, boggaagaamniga oo ah mid ka mid ah. Isbeddelka soo kordhay iyo arrimaha khibrada leh ee qaybta farsamada ayaa dalbanaya heer sare oo ah tallaabooyinka ilaalinta amniga.Tirakoobyada ayaa muujinaya in in ka badan 10% websaydhyada ay hoos u dhacaan sababtoo ah jilayaasha iyo weerarrada.
Inaad noqoto badeeco content ah, ammaankaaga internetka wax badan ayaa jira. Shaqaaleynta xirfadleiyo shirkad SEO ah oo buuxda si ay u maamulaan ammaankaaga internetka inta badan waxay u shaqeeyaan tiro wanaagsan oo ka mid ah shirkadaha ku shaqeeya internetka. La shaqaynta SEOShirkaduhu waxay ku kalsoon yihiin suuqyadda amniga sare, in ay raadsadaan tartamayaasha ugu sarreeya, iyo jiilka dhabarka dhabta ah - купить роутер недорого. Waqtiga dheer, contentsuuqyadu waxay xiiseynayaan inay gaaraan ujeedooyinkooda iyo soo noqoshada celin weyn.
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sare Adeegyada Dijital ah, waxay kudagsantahay weerarrada internetka ee aad u baahantahay inaad ka shaqeyso.
Weerarka xooggan ee xooggan
Caadi ahaan waxa loo yaqaan weerarka indhoolaha ah, weerarka xooggan ee xooggan wuxuu isticmaalaa iibiyeyaasha casriga casriga ahsi aad u jabiso nidaamka kombiyuutarkaaga. Weerarka noocan ahi wuxuu ku dhacaa marar dhif ah. Khasaarayaasha isticmaalaya weerarka indhoolayaasha ah ee indhoolaha ah si ay u galaan internetkafaahfaahinta waxay isticmaalaan dhammaan farsamooyinka la heli karo ee adduunka. Ka dib markii aad u baahantahay kombuyuutarka, hackers waxay helayaan dhammaan koontooyinkaaga iyo furahaagauur-gelidda iyo hubinta kalsoonida. Si kastaba ha ahaatee, waa sahlan tahay in la ogaado weerarka xoogga ah ee xoogga leh sida nidaamka kombiyuutarka uu wax badan sameeyohawlaha macluumaadka isla wakhtigaas.
Tallaabooyinka ka hortagga
Weerar xoog ah oo xoog leh ayaa aad u fudud in la ogaado. Qaadashada hal talaabo ka hor kharajyada bixiya lacag badan ayaa bixiya.Si looga hortago in la jabsaday iyadoo la isticmaalayo weerarka indhoolayaasha ah, waxaad xaddidi kartaa diiwaangelinta isku dayga, oo waxaad xiri kartaa xisaabaadka haddii ay dhacdo isku day aan ku guulaysan.
Weerar weerar ah
Isgaadhsiinta u dhaxeeya adeegsade-yaasha internetka iyo natiijada xisbiyada badan ee natiijada ka soo baxda weerarka MITM..Khasaaradu waxay xakameynayaan ammaankaaga internetka adiga oo dhexgalaya golaha wada-hadalka. Habkan weerarrada, koodhawaanku wuxuu kantaroolayaawax walba oo aan lahayn aqoonta ugu dambaysa ee dadka isticmaala.
tallaabooyinka ka hortagga weerar Mitirka
Si looga hortago weeraryahannadu in ay xakameeyaan amnigaaga internetka, tixgeli isticmaalkagawaarida, gawaarida bogagga, barnaamijyada anti-virus, iyo VPNs. Isticmaalidda xog-isweydaarsiyada la isku halleyn karo ee u dhaxeeya server-ka iyo macaamiisha ayaa ka caawiya xakamaynta khatarta.
weerarka dhageysiga bulshada
Caadi ahaan loo yaqaano injineernimada bulshada, weerarka bulshada waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fududhabka loo jabiyo shirkad si fiican u dhisan. Khasaarada isticmaalaya farsamadaan waxay adeegsanaysaa isticmaalayaasha si ay u muujiyaan sirta iyo faahfaahinta kaararka deynta.
Talaabooyinka ka hortagga
Xayiraaduhu waxay leeyihiin hab lagu maareynayo bartilmaameedkoodii ugu sarreeyay iyagoo abuuraya xiriir diirraniyaga oo leh. Weerarka injineernimada bulshada waxaa looga hortagi karaa dareen diidmo ah oo ku saabsan baahida haysashada xogta xasaasiga ah.
Weerarka macmiilka ku salaysan
Weerarka noocan oo kale ah, khaniisiyeyaashu waxay wax ka qabtaan ammaankaaga internetka adiga oo adeegsanayainaad gujiso dukumiintiyada furan iyo fure. By sidaas, hackers u horseedaa in aad website a xaasidnimo in aad u nugul in la jabiyo.
Abuuritaanka wacyiga shaqaalahaaga baahida loo qabo taxaddar markaad isticmaalaysointernetka waa muhiim. Khasaaradu waxay sii wadayaan feejignaan iyagoo sugaya shaqaale si ay u soo dejiyaan software bilaash ah oo ka soo jeeda goob khaas ah, ka dibna jabsadaururka oo dhan. Noqo taxadar iyo taxaddar markaad isticmaasho WIFI-ka dadweynaha si aad uga fogaato in la jabsado.
Weerarka la faaiidaysto
Weerarka fog waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu faafiyo fayrusyada xaasidnimada, helitaanka xasaasiyaddamacluumaadka, iyo abuuritaanka xakameynta PC-yada.
inaad feejignaadaan adigoo xannibaya dhammaan jilicsanaanta boggagaaga ayaa kaa badbaadin doonajilayaasha. Tixgeli sidii loo fulin lahaa latalinta IT-da ee gudaha iyo debedaba si ay u noqoto mid amaan ah.
Ammaankaaga boggaga wuxuu wax badan ka qabanayaa marka ay timaado suuq geynta iyo suuq-geynta.Goobo badan oo goobo ganacsi ah ayaa hoos u dhacaya bil kasta sababtoo ah weerarrada ka yimaada khayaanada xaasidnimo. Shaqaaleyso xirfadlayaasha IT si aad u cusbooneysiisoka hortagaan in aad boggaaga ka tagto oo ay sabab u tahay jabinta.